Seva PetrPikora.com ini ndinoita kuti ndive nezvyzší bezpečnost zabezpečen technologií HSTS (HTTP Yakasimba Kuteteka). HTTP yakasimba yekutengesa kuchengetedzwa (HSTS) Ndizvo zvingaita kuti munhu ave nemanzwiro emitemo, ezvo zvinogadziriswa zvinyorwa zvese zvinoshandiswa pamusana pekushandiswa kwebasa rekushandiswa kwevhudziro rekushandiswa kwemashoko (ndima. cookie hijacking). Mechanismus umožňuje, aby webový server vynutil v prohlížeči komunikaci pomedí šifrovaného HTTPS přenos na vyloučil tím přenos dat nezabezpečeným HTTP protokolem. HSTS definuje RFC 6797. Webový server yakagadzirirwa HSTS pomoto HTTP hlavičky Yakasimba-Kutakura-Kuchengetedza, která svou hodnotou definuje časový úsek, po který může prohlížeč přistupovat k serveru výhradně zabezpečeně. HSTS pomáhá chránit webové aplikace proti některým pasivním (odposlechy) a aktivním síťovým útokům. Díky HSTS svondo má útočník, který využívá man-in-the-middle útok, velmi síženou šanci, že odchytí nějaké žádosti či požadavky odeslané mezi av webovou aplikací. Staráme se o vaši bezpečnost!
Website yedu kuunganidza zvinotevera mashoko pamusoro wako kushanya:
Informace, kedé jsou nepovinne a jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Jedná se se jemno, případně přezdívku, e-mailovou adresu, popřípadě adresu webové stránky. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro pro vúčast v komentářích ke článku, popřípadě pro odběr od odvědí k těmto komentářům av návštěvní knize.
Tinyerere akaunganidzawo ruzivo (kureva. Vakagamuchira pasina imi nokushingaira kupa ruzivo) vachishandisa michina yakasiyana-siyana uye nzira, akadai Internet Protocol kero, makeke, Internet Tags vamwe. Mashoko uku kuchaita nani musoni tigutsikane vanoshandisa edu uye kuchabatsira vanoshambadzira uye Sponsors kunzwisisa vashanyi vedu .
Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, krá vás zajímají.
Google, sezvo bato mutengesi wechitatu, anoshandisa kushumira achigadzira iri panzvimbo makeke. Nomuseve kudzayi runoita Google dzingava achigadzira kuti vanoshandisa kwakavakirwa kushanya kwavo nzvimbo ino uye dzimwe nzvimbo paIndaneti.
browsers Most ndivo vanonzi kuisa kubvuma kudzayi mafaira, asi browser zvinogona kuisa yokuramba Cookies zvose kana kuti kuratidza kuti kudzayi ari kutumwa. Zvimwe nerubatsiro Google varege kuitike kana makeke ako vakaremara.
Kana iwe uchida, iwe unogona panguva ipi zvayo marara kudzayi Mafaira kubva Google Inc v Obsahové síti Google prostřednictvím Kuramba DoubleClick Cookies.
Kutanga Kuda Kubuda Purogiramu Pakugadzirisa Purogiramu yeWindows Firefox neInternet Explorer pane "DoubleClick cookie", pane imwe yeGooglem pane yazvo inoshandiswa purogiramu yemapurisa pakapedzisira kuwanikwa.
Muchikamu chino, unofanira kutaura URL yewebsite yako, pamwe nezita rekambani, sangano kana munhu anoita sendi ino uye mashoko akakodzera ekutaurirana.
Kuwanda kwehuwandu hwaunoda kuti uite huchasiyana zvichienderana nemitemo yeEurope kana yehurumende nemitemo. Somuenzaniso, iwe uchada kupa kero yepanyama, nhamba yechenyu yekambani.
Doporučený text: Nhare yedu yewebhu ndeyi: https://petrpikora.com.
Zvatinounganidza uye nei tichizviunganidza
V teksi sekci měli uvést, joké osobní údaje shromažďujete odlosiatelů a návštěvníků stránek. Mohou to být například data transakcí - informace o nákupu; technické údaje - informace o cookies; a osobní údaje - informace o uživatelském účtu a emailová adresa.
Iwe unofanirwa kupawo ruzivo pamusoro pekuunganidza uye kuchengetwa kwemashoko evanhu chaiwo, zvakadai se data yehutano.
Mukuwedzera pakutsanangura ruzivo rwemunhu waunounganidza, unofanirwa kuratidza kuti sei uri kuunganidza. Tsanangudzo idzi dzinofanirwa kuongorora kana chikonzero chepamutemo chekuunganidza nokuchengetedza kwepadunhu rako pachako kana kubvumirana kushanda kwemushandisi.
Ruzivo rweunhu pachako haruna kusikwa chete kuburikidza nekubatana newebsite yako. Dunhu rega rega rinowanikawo nehutano hwekugadzira dzakadai sekufambisa mafomu, mazwi, maokie, analytics, uye data yechitatu yakasungirirwa.
Nokusingaperi, WordPress haigoni kuunganidza chero ruzivo rwehumwe ruzivo rwevashanyi uye inounganidza chete data inoratidzwa papeji ye admin "Profile" yevashandisi vakanyoreswa. Zvisinei, mamwe e plug-ins yako anogona kutora mashoko evanhu. Pasi apa unofanira kuwedzera mashoko akanangana pasi apa.
Muchikamu chino, iwe unofanirwa kuratidza kuti chii chinyorwa chakanyorwa kuburikidza nemashoko. Pasi apa tinopa ruzivo pamusoro pezvinhu zvakakosha zvakadini WordPress inounganidza.
Doporučený text: Kana Vashanyi wedzera mashoko kuti Website ichi, mashoko anotorwa muchimiro unoratidzwa kupindura IP kero uye User mumiririri tambo zvaraireva Browser zvimwe muenzi wacho, izvo zvinotibatsira kuziva spam.
Muchikamu chino, iwe unofanirwa kutsanangura kuti chii chingave chinyorwa kune vashandisi vanogona kuisa mafaira emasidhari. Zvose zvinowanikwa mafaira zvinowanzowanikwa pachena.
Doporučený text: Kana iwe uri kuisa mifananidzo kune ino yepaiti, unofanirwa kurega kutora mifananidzo ine dhimbedzero yedunhu (EXIF GPS). Simba vanoona vanogona kutora uye vanoona chero dunhu renzvimbo kubva pamifananidzo pawebhu.
WordPress haisanganisi mafomu ekubatanidza nekutadza. Kana uri kushandisa sangano rekuvhara, shandisa iri chidimbu kuti uratidze kuti ndezvipi zvinyorwa zvemunhu zvakanyorwa kana mumwe munhu akatumira fomu yekubatana uye kuti unochengeta kwenguva yakareba sei mashoko iwayo. Semuenzaniso, unogona kuratidza kuti unochengetedza ruzivo rwakagamuchirwa nefomu rekubatanidza kweimwe nguva yenguva yevashandi, asi iwe usashandisi ruzivo urwu nekuda kwekutengesa.
Muchikamu chino, iwe unofanirwa kuratidza makiki ako nzvimbo yako inoshandisa, kusanganisira izvo zvinogadzira mapapulazi, hutano, uye analytics. Pasi apa makiki akaiswa neShokoPress nekusingaperi.
Doporučený text: Kana iwe uwedzera mazano pane sangano redu, unogona kutibvumira kuchengetedza zita rako, kero ye email, uye webhusaiti kukiki. Nenzira iyi, tinoedza kuwedzera kunyaradza kwako apo iwe unyorera mutsva mutsva, saka iwe haufaniri kuzadza zvakare. Aya makiki achagara gore rimwechete.
Kana iwe uine i-akhawunti uye uri kupinda kune iyi yepaiti, sarudza cookie zvishoma kuti uone kuti browser yako iri kugamuchira kuki. Iyi cookie haina chero dunhu rega uye inogona kubviswa kana shanduro ichivharwa.
Patinopinda mukati, tinogadzirawo makiki akawanda kuti tichengetedze ruzivo rwekupinda kwako uye kugadzirisa skrini kuratidza. Logged cookies ine nguva yeupenyu hwemazuva maviri, uye kuratidza zvirongwa zvekiki gore rapera. Kana iwe ukasimbisa "Yeuka ini" sarudzo, kupinda kwako kwako kutora mavhiki maviri. Kana iwe ukanyora kunze kwekodha yako, kupinda mukati makiki kuchabviswa.
Kana iwe uchigadzira kana kuparidzira imwe nyaya, imwe cookie ichachengetwa mu browser yako. Iyi cookie haina chero dunhu rega uye rinongoratidzira mutezo wePOST wawakaronga. Kubvumirana kwaro kunopera shure kwemazuva 1.
Akaiswa zvinyorwa kubva kune dzimwe nzvimbo
Doporučený text: Zvinyorwa zvepaiti ino zvinogona kunge zvakabatanidzwa zviripo (somuenzaniso, Video, mifananidzo, nyaya, nezvimwewo). Zvinyorwa zvinyorwa kubva kune mamwe mawebsite zvinoita nenzira imwechete sekuti kana mushanyi akashanyira imwe nzvimbo.
Websites izvi anogona kuunganidza mashoko pamusoro penyu kushandisa makeke, kuisa mamwe chechitatu-party Tracking uye chamber kudyidzana wako uyu midzi kugutsikana, kusanganisira Tracking kuti kudyidzana pamwe midzi kugutsikana, kana une nyaya uye vari Logged kuna Website.
In subsection ichi, unofanira kuratidza izvo Analytical chokushandisa iwe kushandisa, sei vanokwanisa vasarudze kubva Tracking, uye anofanira kupa kubatana kuti zvinhu zvemumwe inopiwa Provider wako Analytical mabasa.
Nokusingaperi, WordPress haina kukorera chero nyanzvi yekuongorora. Zvisinei, dzakawanda dzinoshandisa mabhuku dzinounganidza mamwe asingazivikanwe dhesi. Unogonawo kuisa WordPress plugin inopa rubatsiro rwebasa. Muchiitiko ichi, wedzera ruzivo kubva pane iyi plugin apa.
Ndiko watinogovana navo data yako
Muchikamu chino unofanira kupa zita uye mazita ose yechitatu-party rubatsiro pamwe wauri kuudza munhu Web data, kusanganisira vadiwa, gore mabasa, mubhadharo pakashama uye chechitatu-nebato basa rubatsiro, panguva imwe chete tsanangurai chii ruzivo paunotaura navo uye nei. Kana zvichibvira, ndapota kupa inoratidza kuti yavo pasina mitemo.
Nokusingaperi, WordPress haina kupa chero ruzivo rwemunhu kune ani zvake.
Tinogara kwenguva yakareba sei data yako?
Muchikamu chino, unofanirwa kutsanangurira nguva yakareba sei kuchengeta dunhu rega rako rakaunganidzwa kana kushandiswa nesero ino. Nepo iwe unofanirwa kuva nepurogiramu, ine ruzivo rwokuti iwe unotora nguva yakawanda sei dataset uye nei iwe uchiichengetedza, ruzivo urwu harungarongororwa pano. Somuenzaniso, iwe unogona kuratidza kuti unochengetedza zvinyorwa zvemafomu ekutora kwemwedzi mitanhatu, kuongorora dhiyabhorosi kwegore rimwe, uye marekodhi ekutenga vatengi kwemakore gumi.
Doporučený text: Kana iwe uwedzera mhinduro, mhinduro uye metadata yayo ichachengetwa nokusingaperi. Iyo data yakachengeterwa nechinangwa chekuziva nekuzviziva nekubvumirana nemashoko ose anotevera kunze kwekuzvichengeta mumwero wekuenzanisa.
Kune vashandisi vanyoresa pawebsite iyi (kana vane izvi sarudzo), tinochengetedzawo ruzivo rwemunhu wese rwavanopa muhuwandu hwemashandisi avo. Vese vashandisi vanogona kuona, kuchinja, kana kubvisa ruzivo rwavo pachavo chero nguva (kunze kwekuti havagoni kuchinja zita ravo rekushandisa). VaWebmasters vanogonawo kuona uye kuronga mashoko aya.
Ndezvipi kodzero dzako?
Muchikamu chino, unofanirwa kutsanangura kuti vashandisi vekodzero vari kudarika dhesi yavo uye kuti vanogona sei kukumbira kwavari.
Doporučený text: Kana iwe uine nhaurirano pane ino yepaiti kana wawedzera mazano pano, unogona kukumbira faira neyobhuku rekutumira kunze kwatinobatisisa pamusoro pako, kusanganisira zvose zvawakatipa. Iwe unogonawo kukumbira kusunurwa kwemunhu chero upi zvake wedu isu tine hanya pamusoro pako. Iyi sarudzo haina kusanganisira data yatinofanira kuchengetera kutungamira, zvikonzero zvepamutemo kana chekuchengeteka.
Unotumira kupi data yako?
Ichi chikamu chinofanirwa kunyora kushandiswa kwose kwemashoko pamusoro pewebsite yako kunze kweEuropean Union uye kurondedzera kuti idzi data dzinodzivirirwa sei neEurope yehutano hwehutano. Ichi chikamu chinogona kusanganisira web hosting yako, cloud storage, kana mamwe mabasa echitatu.
European date kuchengetedzwa mutemo kunoda kuti ruzivo pamusoro vomuEurope kuti zvaive kunze European Union vanodzivirirwa chete mitemo uye mitemo sokuti mashoko akanga akavakirwa muEurope. Saka, kuwedzera kuisa nzvimbo data, unofanira kutsanangura sei nechokwadi chokuti mitemo aya akasangana, kunyange iwe kana mapati yechitatu, pasinei chibvumirano akadai toga kudzivirira clauses muenzaniso makondirakiti kana tichisunga mitemo chepamusoro .
Doporučený text: Mashoko evashanyi anokwanisa kuongororwa kuburikidza nesangano rinoshandiswa re spam rekuona iro rinogona kuva kune dzimwe nyika.
Muchikamu chino, iwe unofanirwa kupa nzira yekubatana yezvinetso zvevamwe. Kana iwe uchida kuve nenhengo, chinyatsopa kupawo mazita avo nemashoko ekubatana.
Kana uri kushandisa webhusaiti nekuda kwekutengeserana uye unobatanidzwa mune zvakanyanya kuunganidza kana kushandiswa kwemashoko ega, iwe unofanirwa kupawo ruzivo rutsva mumatongerwo ako.
Nzira yatinodzivirira nayo ruzivo rwako rwega
Muchikamu chino, unofanirwa kutsanangura matanho awatora kuti uchengetedze dudziro yemunhu. Semuenzaniso, unogona kupa ruzivo pamusoro pezviyero zvehuchenjeri, zvakadai se: encryption; kuchengetedzwa kwezviyero zvakadai se-multi-factor verification; uye zvimwe zviyero zvakadai sevashandi vekudzidzira munzvimbo yekuchengetedzwa kwemunhu. Kana iwe wakamboita unhu hwehupfungwa huongorori, iwe unogonawo kutaura.
Ndeipi nzira yekuparara kwemashoko?
Muchikamu chino unofanira kutsanangura kuti nzira dzinowanikwa kugadzirisa date leakage, kana chaiye kana zvinogona akadai munyika nhau mugadziriro, zvigadziriswe kunyorerana kana mubayiro kuwana notupukanana.
Ndeapi mapato matatu tiri kuunganidza dunhu rega kubva?
Kana nzvimbo yako inogamuchira dhiyabhorosi yedhimwe data, kusanganisira vashambadziri, ruzivo urwu runofanira kuiswa mune chikamu chezveruzi rako rwevhangeri rinobata nehutatu hwemashoko.
Ndezvipi zvakasarudzwa chisarudzo chatinenge tichiita uye / kana purogiramu yemashandisirwo emufananidzo
Kana yako inopa mabasa. zvinosanganisira zvoga Mutongo - somuenzaniso, vachibvumira vatengi kushandisa kuti chikwereti kana kuunganidza mashoko kuti nokushambadzira Profile - unofanira kuisa azvaiitwa, uye anosanganisira mashoko sei ruzivo urwu rinoshandiswa chii aita chisarudzo izvi aggregated umboo uye chii kodzero zvavanazvo vanoshandisa zvisarudzo pasina kupindira kwevanhu.
Mashoko ezvokuchengetedza zvekutengeswa kwemabhizimisi
Kana iwe uri nhengo yemakambani akarongedzerwa kana iwe uri pasi peimwe mitemo yepabonde, unogona kubvunzwa kuti upe ruzivo rwakakosha.
Kana iwe zvinoda chero mamwe mashoko kana muine mibvunzo pamusoro yedu zvakavanzika mitemo, tapota inzwa wakasununguka nesu kubudikidza Email panguva Privacy.
Panguva www.PetrPikora.com isu Funga The toga vashanyi vedu kuti dzinokosha zvikuru. Gwaro zvakavanzika inozowana Anorondedzera muudzame Types pamusoro Personal Information inounganidzwa uye Rakanyorwa www.PetrPikora.com uye sei tikarishandisa.
Kufanana nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzeWebhu, www.PetrPikora.com inoshandiswa kweefodhi mafaira. Aya mafaira anongotumira vashanyi kunzvimbo yacho - kazhinji mitemo inowanikwa yekambani yekuchengetedza uye chikamu chekubata maitiro ekuongorora. Mashoko aya mukati meefaira yegogni inosanganisira internet protocol (IP) kero, browser browser, Internet Service Provider (ISP), zuva / nguva yechitema, kureva / kubuda mapeji, pamwe pamwe nenhamba yekutsinhira. Mashoko aya anoshandiswa kuongorora mafambiro, kutungamirira chimbo, kutarisa kushandiswa kwevashandi kunzvimbo yese, uye kuunganidza ruzivo rwevanhu. IP mazita, uye mamwe mashoko akadaro haabatanidzi kune chero ruzivo rwunozivikanwa pachako.
www.PetrPikora.com inoshandisa makiki kuchengetedza ruzivo pamusoro pevashanyi, kuti ichengetedze ruzivo rwakanangana nemushandisi pamapeji ayo muenzi wekutsvaga anowanikwa kana kushanyira, uye kuchinja kana kuchinja mararamiro edu ewebhu webhupu zvichibva pavashanyi 'shanduro yemhando kana mamwe mashoko mushanyi anotumira achishandisa browser yavo.
→ Google, sevatengesi vechitatu, anoshandisa makiki kuti ashandise ads pane www.PetrPikora.com.
→ Kushandiswa kweGoogle kweDART cookie kunoita kuti itange kushambadzira kune vashanyi vepaiti yedu kubva pakushanya kwavo kune www.PetrPikora.com uye dzimwe nzvimbo paInternet.
→ Vashandi vanogona kusarudza kushandisa DOC cookie nekushanyira mvumo yeGoogle uye yehutano hwehutano hwehutano pa URL inotevera - http://www.google.com/privacy_ads.html
Vamwe vevashandi vedu vanobvumirana vangashandisa makiki uye ma webboni web site redu. Ishambadziro revadzidzi vedu rinosanganisira .......
Dai uchitaurirana vanonyorwa ichi kuti awane toga chezvawanyora nokuda mumwe nomumwe okushambadza vadyidzani pakati www.PetrPikora.com.
www.PetrPikora.com haana kuwana kana kudzora evästeet pfungwa zvinoshandiswa kuburikidza wechitatu-vebato Vanoshambadza.
Kana iwe uchida kubvisa makiki, unogona kuzviita kuburikidza nemafungiro ako ega yega. Mamwe mashoko akajeka pamusoro pekuchengetedza kwekiokie nemamwe mawebhu web browser anogona kuwanikwa pane dzimwe nzvimbo dzewebhu. Chii Cookies?
Tinotenda kuti zvakakosha kupa rubatsiro rwakawedzerwa rwevana paIndaneti. Tinokurudzira vabereki nevatidzi kuti vashandise nguva paIndaneti nevana vavo kuchengeta, kupinda mukati uye / kana kutarisa uye kutungamirira basa ravo rekuInternet. www.PetrPikora.com hazvizivi kuti inounganidza chero humwe ruzivo rwehumwe hunozivikanwa kubva kuvana vari pasi pezera re 13. Kana mubereki kana mutariri achidavira kuti www.PetrPikora.com ine dhesiyo iyo inozivo-inozivikanwe yemwana ari pasi pezera re 13, tapota tibvunzei pakarepo (tichishandisa mutauri mundima yokutanga) uye tichashandisa zvatinokwanisa kukurumidza kubvisa ruzivo rwakadaro kubva kumabhuku edu.
Iyi Inyoyo yePurogiramu yakagadziridzwa kuitika pa: Svondo, August 27th, 2017.
Iri shanduro mutauro inosanganisira zvinyorwa zvezvinhu zvako pachako dhaka rako raungave richiunganidza, kuchengeta nekugovana, uyewo ndiani angakwanisa kuwana iyo data. Zvichienderana nezvipi zvigadziridzirwa zvinobvira uye ndezvipi zvinyorwa zvinowedzera, ruzivo rwakanangana rwakagoverwa nechitoro chako ruchasiyana. Tinokurudzira kubvumirana neye gweta paunosarudza kuti ndeupi ruzivo ruchazarura pamutemo wako wega.
Isu tinounganidza ruzivo pamusoro pako panguva yekutora kushandiswa kwedu redu.
Paunoshanyira nzvimbo yedu yepaiti, tichazotevera:
Mishonga yawakaona: tichashandisa izvi, semuenzaniso, kuratidza iwe michero yawakangobva kuona
Nzvimbo, IP kero uye mhando yekushandura: tichashandisa izvi kune zvinangwa sekufungidzira mitero uye kutumira
Kutumira kero: tichakumbira kuti uise izvi kuitira kuti tigone, semuenzaniso, kuverenga kutumira usati waisa mutemo, uye kukutumira iwe kurongeka!
Tichashandisawo makiki kuitira kuchengeta nhamba yemotokari yako mukati rekutarisa nzvimbo yedu.
Cherechedza: Unogona kuda kuwedzera tsanangudzo yemutemo wako wekuki nekubatanidza chikamu icho kubva pano.
Kana iwe kutenga kubva kwatiri, isu tichati kukumbira kuti Kukuzivisai pamunoita zita renyu, Billing kero, kutumirwa kero, email address, nhamba dzorunhare, kadhi / muripo mashoko uye uchida nhoroondo ruzivo akafanana Username uye password. Tichazotaura kushandisa ruzivo urwu Purposes, akadai Microsoft, zvinoti:
Tumira ruzivo rwako nezvekero yako uye kuronga
Mhinduro kune zvikumbiro zvenyu, kusanganisira kubhadhara uye kumhan'ara
Nzira yekubhadhara uye kuchengetedza utsinye
Gadzira account yako yechitoro chedu
Kuteerera chero zvipi zvaro zvepamutemo zvatinazvo, zvakadai sekuverenga mitero
Kuvandudza zvigadzirwa zvedu zvezvitoro
Tinokutumira iwe kutengesa mharidzo, kana ukasarudza kuagamuchira
Kana iwe ukasika nhoroondo, tichachengetedza zita rako, kero, email uye nhamba yefoni, iyo inoshandiswa kuisa chekuvhara mairairo emangwana.
Tinowanzochengetedza ruzivo pamusoro penyu kwenguva yakareba sezvatinoda ruzivo rwezvinangwa zvatinotora uye tishandise, uye hatibvumirwi nomutemo kuti tirambe tichirichengeta. Semuenzaniso, tichachengetedza rondedzero yehuwandu kwemakore makumi mashanu ekubhadhara mutero uye kubhadhara mazano. Izvi zvinosanganisira zita rako, kero ye-email uye mabhidha uye kutumira mareta.
Tichachengetedza zvakare mazwi kana mazwi, kana ukasarudza kuvasiya.
Ndiani ari muboka redu anokwanisa kuwana
Nhengo dzeboka redu dzinokwanisa kuwana ruzivo rwaunotipa. Semuenzaniso, vose Vatongi uye Shop Managers vanogona kuwana:
Raira ruzivo rwakafanana nezvakatengwa, apo rwakatengwa uye kwaifanira kutumirwa, uye
Mutengi wekombiki sezita rako, kero ye email, uye kubhadhara uye kutumira mashoko.
Nhengo dzeboka redu dzinokwanisa kuwana ruzivo urwu kuti rubatsire kuzadzisa mirairo, kubhadharwa kwemitemo nekukutsigira iwe.
Muchikamu chino unofanira kunyora kuti ndiani iwe uri kugovana deta pamwe, uye nokuda kwechinangwa chei. Izvi zvinogona kusanganisira, asi kwete kuongororwa, kuongorora, kutengesa, mashizha ekubhadhara, vateresi vekutumira, uye chechitatu chekubatanidzwa.
Isu tinogovana ruzivo nevamwe vatatu vanotibatsira kuti tipe mirairo yedu nemabasa ekuchengetera kwamuri; Semuyenzaniso -
Muchikamu chino iwe unofanirwa kunyora mapurogiramu ekubhadhara kwevatatu iwe uri kushandisa kushandisa mari yako muzvitoro sezvo izvi zvingaita kuti vatengi vese vawane. Isu takabatanidza PayPal semuenzaniso, asi unofanira kubvisa izvi kana iwe usingashandisi PayPal.
Tinogamuchira zvipo kuburikidza nePayPal. Paunenge uchigadzirisa zvikwereti, zvimwe zvepa data yako zvichapfuura kune PayPal, kusanganisira mashoko anodiwa kuti agadzirise kana kutsigira kubhadhara, zvakadai sokutenga kwese nekubhadhara ruzivo.
Nokushandisa izvi kuwedzerwa, unogona kunge uchichengetedza dunhu rega kana kugovera dheinhe nebasa rekunze. Dzidza zvakawanda pamusoro pekuti izvi zvinoshanda sei, kusanganisira zvaungada kuisa mumutemo wako wega wega.
Pfuma: Slider Revolution
Kana iwe uri kushandisa Google Web Fonts (kutadza) kana kutamba mavhidhiyo kana kutinhira kuburikidza neYouTube kana Vimeo muSlider Revolution, tinokurudzira kuwedzera mutsara wakafanana wemapurisa kumapurisa ako emusana:
Nzvimbo yedu inoshandisa plugins kubva kuYouTube, inoshandiswa neGoogle. Munhu anoshandisa mapeji ndeye YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Kana iwe ukashanyira imwe yemapeji edu ane purgin ye YouTube, kubatana kwevaSeva yeYouTube kunotangwa. Pano server yeIndaneti inoudzwa nezvepi yemapeji edu wamakashanyira.
Kana iwe watopindwa neakaunti yako yeYouTube, YouTube inokubvumira kushamwaridzana nemafambiro ako ekutsvaga zvakananga nehupano hwako. Iwe unogona kudzivisa izvi kubva pakubhururuka kubva muAdhi yako yeAydney.
YouTube inoshandiswa kuita kuti webhusaiti yedu inakidze. Izvi zvinopa chikonzero chakanaka pasi peArt. 6 (1) (f) DSGVO.
Kuwedzerwa ruzivo pamusoro pokubata dhiyabhorosi deta kunogona kuwanikwa mukuzivisa kwekuchengetedza kwekuda kweYouTube pasi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Nzvimbo yedu yepaIndaneti inoshandisa zvinhu zvakapiwa naVimeo Video portal. Iyi basa rinopiwa neVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Kana iwe ukashanyira imwe yemapeji edu ane Vimeo plugin, kubatana kwaVimeo servers kunosimbiswa. Heino vimeo seva inozivikanwa nezvepi yemapeji edu wamakashanyira. Mukuwedzera, Vimeo ichagamuchira IP yako kero. Izvi zvinoshanda zvakare kana iwe usina kupinda kuVimeo paunoshanyira plugin yedu kana usina Vimeo account. Mashoko aya anotumirwa kune vimeo server muU.S., uko yakachengetwa.
Kana iwe wakabatanidzwa kuVimeo yako account, Vimeo inokubvumira kushamwaridzana nemafambiro ako ekutsvaga zvakananga nehupano hwako. Unogona kudzivisa izvi nokuvhara kunze kweVimeo account yako.
Nekufananidzira kwemafaira, peji ino inoshandisa mazita ewebhu anopiwa neGoogle. Paunenge uzarura peji, browser yako inotakura mapepa ewebhu anodiwa mumusikana wako webcache kuratidza magwaro nemafonti zvakarurama.
Nokuda kweizvi, browser yako inofanira kugadzirisa kushandira zvakananga kumaseva eGoogle. Saka Google inova kuziva kuti peji yedu yewebhu yakapiwa kuburikidza neIndaneti yako. Kushandiswa kweGoogle Web mazita akaitwa mukufarira yunifomu uye inonakidza mharidzo ye plugin yedu. Izvi zvinopa chikonzero chakanaka pasi peArt. 6 (1) (f) DSGVO.
Kana shanduro yako isingatsigiri mafonti ewebhu, mhando yakashandiswa inoshandiswa nekombiyuta yako.
Kuwedzera mamwe mashoko pamusoro pekutora data yevashandi, inogona kuwanikwa pa https://developers.google.com/fonts/faq uye mumutauro wega wega weGoogle pane https://www.google.com/policies/privacy/.
Pamapeji edu, plugins ari pasocial network SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) ngauve revatema. The SoundCloud plugins inogona Vanoonekwa ari SoundCloud Logo yedu yepaIndaneti.
Paunoshanyira nzvimbo yedu yepaiti, kubatana kwakananga pakati pe browser yako neServerCloud server yakagadzirwa kuburikidza ne plugin. Izvi zvinobvumira SoundCloud kugamuchira ruzivo rwawakashanyira nzvimbo yedu kubva pakero yako yeP. Kana iwe ukanyora pane zvimedu "Sezva" kana "Shandisa" paunenge wapinda muConCloud yako, unogona kubatanidza zviri mukati memaji edu kuIndioCloud profile yako. Izvi zvinoreva kuti SoundCloud inogona kushanyira kushanyira mapeji edu nekombiyuta yako yevashandi. Tinoda kuratidza kuti, semupi wemapeji aya, hatina ruzivo rwezvinyorwa zvemashoko akaparidzirwa kana kuti achashandiswa sei neConceptCloud. Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pemutemo wepachena weConicCloud, tapota enda ku https://soundcloud.com/pages/privacy.
Kana iwe usingadi SoundCloud kushamwaridzana nekushanyira kwako kunzvimbo yedu neInternCloud account yako, tapota pinda paInternCloud account yako.